Progressive Voice Myanmar » Scholars for Myanmar – မြန်မာအတွက် တတ်သိပညာရှင်များ
Statement 327 Views
Scholars for Myanmar – မြန်မာအတွက် တတ်သိပညာရှင်များ
May 19th, 2021 • Author: Scholars for Myanmar • 10 minute read
To Concerned Governments and MPs Around the World,
We, scholars and professionals from around the world working on the Republic of the Union of Myanmar, are writing to you, as we believe the time has come for governments worldwide to effectively support the struggle for democracy in Myanmar by recognising and supporting the newly formed National Unity Government (NUG).
On 1 February 2021, the Myanmar Military (the Tatmadaw) began its attempt to seize state power in Myanmar, thereby breaching the very constitution it itself had drafted. Despite its efforts to make up for its lack of legitimacy by brutally terrorising the population into submission, the Tatmadaw has so far failed to establish meaningful control over the state. Due to the massive resistance by the population, the Tatmadaw has been unable to establish control over the public administration, economy, and population of Myanmar, and it has even lost further territorial control in the border areas. The coup is thus by no meansafait accompli.
Meanwhile, the “Committee Representing the Pyidaungsu Hluttaw [Union Parliament]” (CRPH) was formed by Members of Myanmar Parliament who were democratically elected in the elections of 8 November 2020. These elections were deemed credible by not only independent observers, but also by governments around the world. Inashow of unity unseen in decades in the country, the CRPH has engaged in broad coalition-building, and joined hands with the Civil Disobedience Movement (CDM), strike committees, trade unions, civil society organisations, and political as well as armed representatives of the many ethnic groups of the country. On 16 April,aNational Unity Government (NUG) was established on the basis of an interim Federal Democracy Charter. The NUG thus enjoys legitimacy through not only the 2020 elections but also through the broad support of the people of the country and diaspora groups; ethnic armed organisations (EAO) included in the NUG also exert autonomy and sovereignty over various regions/territory.
This is notaminor achievement. Myanmar has historically been plagued by divisions along ethnic, religious and political lines. And while we recognise the need for the NUG to itself evolve to include more diverse voices including those from the Rohingya, now there isahistoric chance that the newfound incipient unity within the population can rid Myanmar of military rule and lead the country onapath toafederal democratic order that can also end the civil war of over seven decades –aprocess that should receive global support to ensure that promises of inclusivity and federalism made now will be kept later.
While this will be an uphill battle, it is also the only viable option at the moment. Any attempts at mediation or “compromise” to return to the status quo ante rely on wishful thinking and go against the expressed will of the Myanmar people. This will is represented by their elected government, the NUG, and illustrated by the massive mobilization of Myanmar citizens to demand democracy. The Tatmadaw has itself destroyed any remaining trust in its own “roadmap to discipline-flourishing democracy” by massacring its own population and has made no attempt whatsoever to de-escalate the situation and to findacompromise. In any case, Western countries are certainly not inaposition to beamediator inanegotiated scenario in Myanmar. This should be left to the UN and regional actors.
Rather, democratic countries should expressly stand with the people of Myanmar in their struggle for democracy. We must go beyond purely punitive measures and find ways to actively support the democratic forces. The best way to do so is by publicly recognising and supporting the NUG as the legitimate government of the Republic of the Union of Myanmar. As most countries have already condemned the military coup and called for “restoration of democracy”, recognising the NUG should bealogical next step.
The position “We only recognise states, not governments,” should not be used asarote excuse. Besides the fact that there are recent examples where states have declared recognition of governments in contested cases, there will inevitably arise situations requiring an implicit recognition of either the Tatmadaw’s illegitimate “State Administrative Council” (SAC) or the legitimate NUG, as the recent crisis around the Myanmar embassy in London has shown.
Time is short. Over 785 people have already been killed, at least 50 of which were children. Neighbourhoods throughout the country are being terrorised by an army that behaves likeaheavily armed, out-of-control criminal cartel. In the borderlands, the over 70-year-old civil war is escalating, with civilians being bombed by the Air Force, and refugees trying to escape to India and Thailand. The coming weeks and months will determine whether the country goes back to potentially decades of incompetent, brutal and devastating dictatorship underamilitary that stands accused of genocide and crimes against humanity by the UN, resulting inagenocide case before the ICJ, or whether the people of Myanmar will have the opportunity to face their multiple challenges inademocratic manner, and once and for all overcome the structures that allow the military elites to exercise undue influence across the country.
Countries that have declared the promotion of democracy and human rights to be at the centre of their foreign policy, can and must play their part to support this momentous task, which will haveapositive effect for democratisation in the whole region. The people of Myanmar will pay close attention, and will always remember who is on their side right now.
မြန်မာ့အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ ပညာရှင်များ ၊ လေ့လာသုံးသပ်သူများမှ ဤစာကို ရေးသားရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ယခုအချိန်သည်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး၏ အစိုးရများအနေဖြင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကို ထိရောက်စွာ ပံ့ပိုးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကို တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် ထောက်ခံအသိအမှတ်ပြုရန်အချိန်ကျရောက်လာပြီဟု ယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၂၁ တွင် မြန်မာစစ်တပ် (တပ်မတော်) သည် ယင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်ပြီး နိုင်ငံတော်အာဏာကို မတရားသိမ်းယူရန် ကြံစည်ခဲ့သည်။ ဤတရားမဝင်လုပ်ရပ်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ပြည်သူလူထုအား ခြိမ်းခြောက်အကြမ်းဖက်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ယနေ့အချိန်အထိ တိုင်းပြည်အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိရောက်စွာ ချုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိသေးပါ။ ပြည်သူလူထု၏ တခဲနက် ဆန့်ကျင်မှုကြောင့် တပ်မတော်သည် ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အပါအဝင် မည်သည့်ကဏ္ဍကိုမှ မချုပ်ကိုင်နိုင်သည့်အပြင် နယ်စပ်ဒေသများ၌ပါ ဩဇာအာဏာသက်ရောက်မှုကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အာဏာသိမ်းမှုသည် ကျဆုံးရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးသားပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။
တချိန်တည်းမှာပင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် လွှတ်တော်အမတ်များက “ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ” (CRPH) ကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် လေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့် တကမ္ဘာလုံးကပါ လက်ခံအတည်ပြုထားသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါသည်။ CRPH သည် အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုသပိတ်အဖွဲ့များ၊ သမဂ္ဂများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေး အင်အားစုများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သော ကြီးမားလှသည့် မဟာမိတ်ညွန့်ပေါင်းစုကြီးနှင့် ချိတ်ဆက်လျှက် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း တစ်ခါမျှမပေါ်ပေါက်ဖူးခဲ့သည့် သွေးစည်းညီညွတ်မှုကို ပြသနိုင်ခဲ့သည်။ ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ်ကို အခြေခံထားသည့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် ၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အရတင်သာမက နိုင်ငံတဝှမ်ရှိ အမျိုးစုံသောအစုအဖွဲ့တို့၏ ထောက်ခံမှုပါရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ထိုမျှမက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ ပါဝင်မှုလည်းရှိသောကြောင့် လွတ်လပ်စွာ အုပ်ချုပ်သည့်နေရာဒေသများတွင်လည်း အတည်ပြုထောက်ခံမှုရရှိထားပြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
သမိုင်းတလျှောက်တွင် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ နိုင်ငံရေးအယူဝါဒပေါ်မူတည်ပြီး အကွဲအပြဲများသာ ပြည့်နှက်နေခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထိုသွေးစည်းညီညွတ်မှုသည် အံ့မခန်းဖွယ်ရာပင်ဖြစ်လေတော့သည်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့် ရိုဟင်ဂျာများအပါအဝင် ပို၍စုံလင်သောအစုအဖွဲ့များ ပါဝင်လာနိုင်စေရန် ပိုမိုစွမ်းဆောင်ရန်လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသေးသော်လည်း၊ ယခုလက်ရှိ သွေးစည်းညီညွတ်နေမှုသည် နှစ်ပေါင်း၇၀ကျော် တောက်လောင်နေသော ပြည်တွင်းစစ်မီးကို အဆုံးသတ်နိုင်စေရုံမက စစ်တပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြယ်လှယ်နေမှုကိုပါ အဆုံးသတ်စေမည့်မကြုံစဖူးမဟာအခွင့်အလမ်းကြီးကို မိမိတို့အနေဖြင့် လက်မလွှတ်သင့်ပါ။ အားလုံးအတူတကွပါဝင်နိုင်မှုနှင့် ဖယ်ဒရယ်ဝါဒတို့ပေါ်ထွန်းလာမည့် ဤအခြေအနေသည် တကမ္ဘာလုံး၏ ထောက်ပံ့မှုကို ရရှိသင့်ပါသည်။
ပို၍ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမည့် ခရီးဖြစ်သည်မှာမှန်သော်လည်း ယခုမျက်မှောက်အခြေအနေအရ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာမှာလည်း ထိုတစ်နည်းသာ ရှိပါသည်။ ညှိနှိုင်းရေးလမ်းစဉ်များ၊ အရင်အခြေအနေကို ပြန်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းသည့် “လျော့ပေါ့ပေးရေး” လမ်းကြောင်းများသည် အခြေအမြစ်မရှိရုံသာမကဘဲ မြန်မာပြည်သူလူထု၏ အလိုဆန္ဒနှင့်ပင်ဆန့်ကျင်လျှက်ရှိပါသည်။ ထိုလိုအင်ဆန္ဒကိုလည်း ဒီမိုကရေစီကိုတခဲနက်တောင်းဆိုနေသည့် မြန်မာပြည်သူလူထု လှုပ်ရှားမှုက သက်သေပြနေပါသည်။ တပ်မတော်သည် သူတို့ကာကွယ်ပေးရမည့်ပြည်သူပြည်သားများကို သတ်ဖြတ်ပြီး အခြေအနေတင်းမာမှုကိုလျော့စေရန် မည်သည့်အားထုတ်မှုကိုမျှပင် လုပ်ဆောင်နေခြင်းမရှိသည်ကပင် သူတို့ပြောဆိုလေ့ရှိသည့် “စည်းကမ်းပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီလမ်းပြမြေပုံ” အပေါ်ယုံကြည်သက်ဝင်စေနိုင်မှုကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ညှိနှိုင်းတွေ့ဆုံမှု ဆိုသည်မှာလည်း ကုလသမဂ္ဂနှင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများကသာ ကြိုးစားသင့်သည့်အရာများဖြစ်ပြီး အနောက်နိုင်ငံများအနေဖြင့် မည်သို့မျှမတတ်နိုင်ပါ။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီကိုတောင်းဆိုနေသည့် မြန်မာပြည်သူလူထုဖြင့်အတူ အတိအလင်းရပ်တည်ပေးခြင်းသာ ဖြစ်သင့်ပေသည်။ အာဏာရှင်ကိုအရေးယူဒဏ်ခတ်မှုသက်သက်ဆောင်ရွက်ရုံသာမက ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကိုလည်း တက်ကြွစွာ အားပေးကူညီမှုပြုရပါမည်။ ထိုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြောင်းကို အတိအလင်းကြေညာခြင်းနှင့် ဤအစိုးရကို ထောက်ပံ့ကူညီခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံအများစုသည် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ရှုံ့ချကန့်ကွက်ပြီး “ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထူထောင်ရေး”ကို တောင်းဆိုထားပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းသည် သင့်လျော်ပြီး အကျိုးအကြောင်းအားလျော်သော လုပ်ဆောင်ချက်နောက်တစ်ဆင့်လည်း ဖြစ်ပေသည်။
“နိုင်ငံကိုသာအသိအမှတ်ပြုနိုင်ပြီး အစိုးရအားအသိအမှတ်မပြုနိုင်”ဆိုသည့်ရပ်တည်ချက်သည် အလွတ်ကျက်နှုတ်တိုက်အာဂုံဆောင်ထားသည့် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်မနေသင့်ပါ။ အချုပ်အခြာအာဏာအရေး အငြင်းပွားလေ့ရှိသည့် အခြားနိုင်ငံများအရေးတွင်လည်း အနောက်အုပ်စုအနေဖြင့် မိမိတို့အသိအမှတ်ပြုသည့်အစိုးရသည် မည်သူဖြစ်ကြောင်းကြေညာသည့် သာဓကများရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ လန်ဒန်ရှိမြန်မာသံရုံးတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အကြပ်အတည်းကိုကြည့်လျှင် နောင်တွင်လည်း မိမိတို့အနေဖြင့် တပ်မတော်၏တရားမဝင်ခန့်အပ်နေရာယူထားသည့် “နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ” ကိုသွယ်ဝိုက်စွာအသိအမှတ်ပြုမည်လော တရားဝင်သည့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကိုအသိအမှတ်ပြုမည်လော ဆိုသည်မှာမဖြစ်မနေပေါ်ပေါက်လာတော့မည့် အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ပါသည်။
အချိန်ဆွဲမနေသင့်တော့ပါ။ ယနေ့အချိန်အထိ ကလေးသူငယ် (၇၈၅) ဦးအပါအဝင် အပြစ်မဲ့ပြည်သူပေါင်း (၅၀) ကျေ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။ လက်နက်အပြည့်အစုံတပ်ဆင်ထားကာ အထိန်းအကွပ်မဲ့ရမ်းကားနေသည့် ဒုစရိုက်အဖွဲ့သည် ပြည်သူလူထုတို့၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တို့အား ခြိမ်းခြောက်နေပါသည်။ နယ်စပ်ဒေသများ၌လည်း နှစ်၇၀ကျော်စစ်မီးများ အရှိန်ပြင်းစွာ ပြန်လည်တောက်လောင်လာနေပြီး လေတပ်မှ ဗုံးကြဲပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပြည်သူများသည် အိန္ဒိယနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုနှင့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဒုစရိုက်မှုကျူးလွန်သည့် စစ်အာဏာရှင်၏ ရက်စက်စွာ၊ ညံ့ဖျင်းစွာအုပ်စိုးမှုအောက် နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်များစွာပြန်လည်သက်ဆင်း‌မည်လား။ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးတွင်စစ်တပ်၏ ခြယ်လှယ်မှုကို အပြီးထိတိုင် အမြစ်ဖြတ်ပြီး ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းဖြင့် နိုင်ငံအတွက် စိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံကို ရင်ဆိုင်နိုင်စေရန် အခွင့်အလမ်းကို မြန်မာပြည်သူများအား ပေးအပ်မည်လား။ ထိုမေးခွန်းကို လာမည့်လများအတွင်း ဖြစ်ပေါ်မည့် အခြေအနေများက အဖြေပေးပါလိမ့်မည်။
ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စများကို မိမိတို့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒများတွင်ရှေ့တန်းတင်သည့် နိုင်ငံများအနေဖြင့် ထိုကြီးမားလှသည့်တာဝန်ကြီးကို အကူအညီပေးနိုင်ရုံတင်မကဘဲ ပေးကိုပေးရပါမည်။ ယင်းလုပ်ရပ်ကြောင့်လည်း ဒေသတွင်းဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးကိုလည်း ကြီးစွာအကျိုးပြုသောသက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မည်။ မြန်မာပြည်သူများကလည်း အရေးတော်ပုံတွင် မည်သူက ပြည်သူများဘက် ပါဝင်ပေးခဲ့သည်ဆိုသည်ကို အစဉ်အမြဲအမှတ်ရနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
Dr Ashley South, Chiang Mai University
David Scott Mathieson, independent analyst on conflict, peace, human rights and humanitarian issues
Dr Melissa Crouch, Professor and Associate Dean Research, UNSW Faculty of Law and Justice
Dr Matthew J Walton, Department of Political Science, University of Toronto
Prof. Michael W. Charney, Chair of Asian and Military History at SOAS, University of London
Kelley E. Currie, former US Ambassador at Large for Global Women’s Issues
Kim Jolliffe, Independent
Philipp Annawitt, Democratic Governance Specialist
Rosalie Metro, University of Missouri-Columbia
Dr. David Brenner, School of Global Studies, University of Sussex
Prof. Dr. Boike Rehbein, Department of Asian and African Studies, Humboldt University Berlin
Prof. Dr. Claudia Derichs, Department of Asian and African Studies, Humboldt University Berlin
Dr Nick Cheesman, Fellow, Australian National University
Prof. Dr. Judith Beyer. Head of Research Group “Social and Political Anthropology”, University of Konstanz / Myanmar-Institute e.V
Dr. Juliane Schober, Professor, Arizona State University
Dr Jotika Khur-Yearn, SOAS Library, University of London
Tyler Giannini, International Human Rights Clinic, Harvard Law School
Dr. Daniel M. Stuart, Associate Professor, Department of Religious Studies, University of South Carolina
Prof. Bridget Anderson, Director Migration Mobilities Bristol, University of Bristol
Isla Glaister, CEO, Business Plan for Peace
Prof. Kate Crosby, King’s College London
Mratt Kyaw Thu, Freelance Journalist
Dr Frances O’Morchoe, Parami Institute of Liberal Arts and Sciences
Angshuman Choudhury, Senior Researcher and Coordinator, South East Asia Research Programme, Institute of Peace and Conflict Studies, New Delhi
Dr. Khin Myo Wai, Independent Researcher
Dr Karin Dean, School of Humanities, Tallinn University
Prof. Willem van Schendel, University of Amsterdam
Dr Pavin Chachavalpongpun, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University
Mikael Gravers, Associate Professor Emeritus, Anthropology, Aarhus University
Dr. Rainer Einzenberger, (Lecturer) Department of Development Studies, University of Vienna
Georg Bauer, Department of History, University of Vienna
Samia Akhter-Khan, Department of Psychology, Humboldt-University of Berlin / Myanmar-Institute e.V.
Carlos Sardiña Galache, independent journalist
Francesco Buscemi, Emerging Research on International Security, Sant’Anna School of Advanced Studies
Dr. Felix Girke, HTWG Konstanz
Manuela Oppenheim-Bohlander, Medical Assistant, Ethnologist, Development cooperation Mingalaba Global Help (support of local NGOs in Myanmar)
Htet Min Lwin, Department of Humanities, York University, Toronto
Dr. François Robinne, Anthropologist, senior researcher at National Centre for Scientific Research (CNRS), Aix-Marseille University, France
Chloé Baills, Department of Religious Studies, Practical School of High Studies (EPHE), France
Dr. Louise Pichard-Bertaux, Institut de recherches asiatiques, CNRS-Aix Marseille University, France
James F. Cerretani, Department of Anthropology, Goldsmiths- University of London
Ye Ni, Irrawaddy News Editor
Dr. Jella Fink, Weltfriedensdienst e.V./ Myanmar-Institut e.V.
Diana M. Tobias, Myanmar-Institut e.V.
Jennyfer Hake, Myanmar-Institut e.V.
Mirja Brand, Weltfriedensdienst e.V.
Johanna Neumann, Department of Asian and African Studies, Humboldt University Berlin / Myanmar-Institut e.V.
Esther Tenberg, MF Norwegian School of Theology, Religion and Society / Myanmar-Institut e.V.
Felix Hessler, KURVE Wustrow / Myanmar-Institut e.V.
Judith Kunze, Friedensfachkraft KURVE Wustrow
Hon. Prof. Dr. Nicole Haeusler, University of Sustainable Development, Eberswalde/Germany
Dr Jenny Hedström, Swedish Defence University
Carolin Hirsch, PhD candidate in Social and Political Anthropology, University of Konstanz / Myanmar-Institute e.V.
Benedict Mette-Starke, PhD researcher at Research Group “Social and Political Anthropology”, University of Konstanz / Myanmar-Institute e.V.
Megan Ryan, PhD Candidate in Political Science, University of Michigan
Dr Elizabeth Rhoads, Centre for East and Southeast Asian Studies, Lund University
AHM Abdul Hai, PhD Researcher, University of Bonn
Dr Amporn Jirattikorn, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
Dr Kangki Megu, Principal, Indira Gandhi Government College, Arunachal Pradesh
Dr Kerstin Duell, independent political analyst
Phuong Le Trong, Sociologist, Dept. of Southeast Asian Studies, Univ. of Bonn
Laura Faludi, KURVE Wustrow e.V.
Dr Indrė Balčaitė, independent researcher
Georg Winterberger, Department of Social Anthropology and Cultural Studies, University of Zurich / Myanmar-Institute e.V.
Dr. Ulrich Kuch, Faculty of Medicine, Goethe University Frankfurt
Matt Schissler, PhD Candidate in Anthropology, University of Michigan
Tony Neil, PhD Candidate in International Development, London School of Economics
Lina Knorr, PhD Candidate at the Institute of Asian and African Studies, Humboldt-Universität zu Berlin
Ken MacLean, Professor Clark University
Dr Su Lin Lewis, School of Humanities, University of Bristol
Paul Taylor, Independent consultant and policy analyst, Yangon
Stephen McNamara, Solicitor, The Tharthi Myay Foundation
Finbarr Sweeney, MSc Student, UCL
Sean Bain, independent legal adviser
Gustaaf Houtman, Royal Anthropological Institute
Dr. Lisa Brooten, College of Mass Communication and Media Arts, Southern Illinois University
Dr Charlie Thame, Asst. Prof. International Relations, Faculty of Political Science, Thammasat University
Gayathry Venkiteswaran, Assistant Professor, University of Nottingham Malaysia
Dr. Stephen Campbell, Nanyang Technological University
Jan-Philipp Sendker, Author
Andrew Dade, PhD Candidate, Department for the Study of Religion, University of Toronto
Dr. Kristina Kironska, Senior Researcher, Palacky University Olomouc
Courtney Wittekind, PhD Candidate, Department of Anthropology, Harvard University
Dr. Tharaphi Than, Northern Illinois University
Erica Leni, PhD Candidate, DIRPOLIS, Sant’Anna School of Advanced Studies
Alex Moodie, PhD Candidate, Durham University
Mary Kate Long, Department of Asian Studies, Cornell University
Maxime Boutry, Social Anthropologist (Ph. D.) and Independent Consultant
Nicolas Salem-Gervais, INALCO, Paris
Danilo Araña Arao, College of Mass Communication, University of the Philippines Diliman
Mike McGovern, Department of Anthropology, University of Michigan
Tony Scott, Department for the Study of Religion, University of Toronto
János Jelen, ambassador (1996-1998), rector, Dharma Gate Buddhist College (2010-2019), Budapest, Hungary
Dr Alexandra Green, Curator for Southeast Asia, British Museum
Liyun Wendy Choo, School of Learning, Development and Professional Practice, University of Auckland
Justine Chambers, Visiting Fellow, School of Culture, History and Languages, Australian National University
Dr Elisabeth Olivius, Department of Political Science, Umeå University, Sweden
Dr. Laura Hornig, Myanmar-Institut e. V.
Kaja Berg Hjukse, PhD Candidate, Department of Social Anthropology, University of Oslo
Dr Laura Hornig, Myanmar-Institut e. V.
Gábor Vargyas, Professor of Anthropology, University of Pécs
Ponpavi Sangsuradej, PhD Candidate. Department of History. SOAS, University of London
Mgr. et Mgr. Dagmar Bečková, Faculty of Arts, Charles University
Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D., Oriental Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic
PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D., Senior Researcher, Institute of International Relations Prague
Sabe Soe, Executive Director, Burma Center Prague